Dhuga dubaachu enyyu iyyuu Namaa hin dhorkuu kutataan gara kan abba jedhe tahu – Kichuu
HomeAfaan OromooTVDhuga dubaachu enyyu iyyuu Namaa hin dhorkuu kutataan gara kan abba jedhe tahu
Kafaaloon OPDO miti wayyaannee sirna nama nyaata sanafu gadii hin jenee hubaadha kafaaloon enyyu akka tahe
New oromo music-2019
Weellisaa Daniel Angesa
ba.yee namatii tola
jabadhuu sanyii goota
Qawwee yoo itti galchinee biti siryaa taati. haasawa Daawuud Ibsaa gaafa TPLF angoorra jirtuu
Shirri OPDOn xaxxa jirtu akkummaa itti fufeeti jira.
1 Namooni qarshii miili’ona 19 fudhataani jaal Maaroo qabuuf ykn ajeessuuf deema jiran namni 10 magaalaa Naqamtee seenani jiru. Akeeki keessan hin milka’uu jenna!
2 Magaalaa Naqamtee keessatti namoota bakka birra irra fidun walga’ii leenjii Hoteeloota gurguddoo Magaalaa Naqamtee keessati walitti qabun leenjii kennaafi jiru.
Leenjiin kenama jiru
* Namooni bakka birra irra dhufan sun akka jirataa magaalaa Naqamtee ta’anitti walga’ii Uummataa irratti erga ABOn biyya gallee nagaan keenya jeeqamee kan nageenya biyya keenya boreessa jiru ABO akka jedhani midiyaafi Ibsa kenan.
* haala teessumma magaalaa Naqamtee itti himuun gaafa yaada laatan an jirataa Ganda 07,04,02 fi kkf akka jedhan. Irratti haalan leenjiisa jiru kanaaf uummani magaalaa Naqamtee shirra OPDO kana haala akka hubaatan jenna.
3 Basastoota kaneen dur uummataa birrati beekaman dhisun namoota kanaan dura beekamti hin qabneefi nama waa’ee siyaasa oma hin beekneef qarshii kenuun akka hojii basaasa irratti bobba’aan gocha jiru kanaaf uummani keenya qarshiif jettani seena keessan hin baleessina isiniin jenna!
Kanaaf Uummanniif Qeerroon Bilisummaa Oromoo shirra deema jiru hubaate ga’ee isa akka ba’aatu dhaamana!
#Meeshaa Waraana Gurguddaa Fayyadaamun Wayyaneef iyyuu Bu’a hin taanne Kiisaaraa gudda keessa buse.
Meeshaa Waraana ittin Uummata Oromoo irreecha irraatti fixanin OPDO Uummata lola jirti.#Dambi Dolloo kana fakkaati.